सूर्य ग्रहण’, कुन ठाउँमा कति बजे ? जान्नुहोस – " कञ्चनजंगा News "
सूर्य ग्रहण’, कुन ठाउँमा कति बजे ? जान्नुहोस
No Comments on सूर्य ग्रहण’, कुन ठाउँमा कति बजे ? जान्नुहोस
काठमाडौ। विपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिले बिहीवार बिहान ८ बजेदेखि टेलिस्कोपको सहायताबाट प्रत्यक्षरुपमा सूर्यग्रहण अवलोकन गराउने भएको छ ।
सर्वसाधारण मानिसमा वैज्ञानिक चेतना तथा संस्कारको प्रादुर्भाव गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रत्यक्षरुपमा सूर्यग्रहण अवलोकनको व्यवस्था गरिएको समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. सनतकुमार शर्माले राससलाई जानकारी दिए । समितिको कार्यालय कीर्तिपुरमा टेलिस्कोपमा सोलार फिल्टर जडान गरी सुरक्षित तरिकाबाट अवलोकनको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले बत्तीसपुतलीस्थित कार्यालयबाट सूर्यग्रहण अवलोकनको व्यवस्था मिलाएको अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले सुनाए । समितिले नेपालका ३ स्थानबाट देखिने खण्डग्रास सूर्यग्रहणसम्बन्धी तथ्य समेत सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौं, महेन्द्रनगर र भद्रपुरबाट देखिने सूर्य ग्रहणको वैज्ञानिक रुपमा गणितीय गणनाअनुरुप शुद्ध तथ्यांक निकाली जनमानसमा जानकारी गराएको हो ।
जसअनुसार काठमाडौंमा ०८ः४३, महेन्द्रनगरमा ०८ः३८ र भद्रपुरमा ०८ः४८ बजे ग्रहण शुरू हुनेछ । यसैगरी ग्रहणको मध्य पनि काठमाडौंमा १०ः०१, महेन्द्रनगरमा ०९ः५२ र भद्रपुरमा ०९ः५९ बजे हुनेछ । ग्रहणको अन्त्य काठमाडौंमा ११ः३३, महेन्द्रनगरमा ११ः१९ र भद्रपुरमा ११ः२७ बजे हुने समितिले जनाएको छ ।
ग्रहण अवधि काठमाडौंमा २ घण्टा ५० मिनेट, महेन्द्रनगरमा २ घण्टा ४३ मिनेट र भद्रपुरमा २ घण्टा ५३ मिनेटसम्म रहनेछ । यसैगरी सूर्य ग्रहणको दिप्तीक्रम काठमाडौंमा ०.५०१, महेन्द्रनगरमा ०.५११ र ०.४७४ हुनेछ । ग्रहण प्रतिशत भने काठमाडौं र महेन्द्रनगरमा ३९ एवं भद्रपुरमा ३६ रहने जनाइएको छ ।
यसपटकको सूर्यग्रहण नेपालबाट बिरल छायाँ र खण्डग्रास मात्र देखिने छ । पृथ्वीको केही भागको करीब १०० किमीको ब्याण्डबाट बलायाकार वा रिङ ग्रहण अवलोकन गर्न सकिने छ । चन्द्रमाको छायाँको व्यास सूर्यको भन्दा सानो भएकाले बीच भाग ढाके पनि किनारबाट केही प्रकाश वरिपरि रिङजस्तो देखिने निमित्त कार्यकारी निर्देशक शर्माले जानकारी गराए । यस्तो अवस्थालाई ‘रिङ अफ फायर’ भनिन्छ ।
साउदी अरबबाट ‘रिङ अफ फायर’ देखिन शुरू हुन्छ । कतार, यूएइ, ओमान, दक्षिण भारत, उत्तरी श्रीलंका, बंगालको खाडी, मलेसिया, इण्डोनेसिया, सिंगापुर, उत्तरी मेरियाना द्वीप, फिलिपिन्स हुँदै प्रशान्त महासागरको गुआम टापुमा पुगेर अन्त्य हुनेछ । बिरल छायाँ भने पूर्वी युरोपको केही भाग, एसियाको अधिकांश भाग र अस्ट्रेलियाको उत्तरी भागबाट देख्न सकिने समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।
यसैगरी बलायाकार सूर्यग्रहण काठमाडौंबाट देखिने छैन । यहाँबाट खण्डग्रास सूर्यग्रहण मात्र अवलोकन गर्न सकिने छ । सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउँदा चन्द्रमाले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई छेक्छ । सूर्यको प्रकाश चन्द्रमाले छेक्दा पृथ्वीमा पर्ने छायाँलाई नै सूर्यग्रहण भनिन्छ ।
पूरै सूर्य ढाक्ने गरी अर्थात् खग्रास सूर्यग्रहण पृथ्वीको १ स्थानमा ३७५ वर्षको अन्तरमा मात्र लाग्ने समितिले जनाएको छ । पृथ्वीबाट सूर्य लगभग १५ करोड किमि टाढा छ । सूर्यको व्यास पृथ्वीभन्दा १०९ गुणा ठूलो छ । चन्द्रमाको व्यास पृथ्वीको एक चौथाइमात्र छ ।
सूर्यग्रहणलाई खाली आँखा, बाइनाकुलर वा टेलिस्कोपको प्रयोग गरेर अवलोकन गर्नु नहुने समितिको ठहर छ । यसरी हेरेमा आँखा सदाका लागि बिग्रने सम्भावना हुन्छ । एक्सरे प्लेट, ध्वाँसो लगाएको ऐना तथा पानीमा समेत सूर्यको प्रतिविम्बलाई अवलोकन गर्नुहुँदैन । हिमाल आरोहणमा प्रयोग गरिने विशेष प्रकारको गाढा रङको धातु लेपन भएको चश्माबाट मात्र ग्रहण अवलोकन गर्न सकिने कार्यकारी निर्देशक शर्माले सम्झाए । साधारण चश्माको प्रयोग गरेर समेत ग्रहण नहेर्न पनि उनले आह्वान गरे ।
सूर्य ग्रहणको समयमा मानवमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि वैज्ञानिक आधार प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले भने ग्रहणको मानिसमा प्रभाव शास्त्रीय विश्लेषणअनुसार ४ प्रहर अर्थात् १२ घण्टा अघिदेखि नै सुतक लाग्ने जनाएको छ ।
जसअनुसार बुधवार बेलुकी ८ः४३ बजेदेखि नै बालक, वृद्ध र बिरामी बाहेकलाई भोजन निषेधको शास्त्रीय वचन रहेको समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधनालगायत कर्म गर्न भने शुभ हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । ग्रहणका समयमा दीक्षा मन्त्र लिन पनि उत्तम मानिन्छ । ग्रहणका बेला सकेसम्म तीर्थ स्थलमा नसके नजिकको नदी, ताल, तलाउ, पोखरी यति पनि सम्भव नभए घरमै स्नान गर्नुपर्ने निर्णय सिन्धु, हेमाद्रि, कालमाधव, वीरमित्रोदय लगायत धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रहणका समयमा सुते रोग लाग्ने, पिसाब गरे दरिद्र, दिसा गरे कीरा भएर जन्मने, मैथुन गरे गाउँको सुँगुर भएर जन्मने, सिङ्गारपटार गरे कुष्ठ रोगी, भोजन गरे अधोगति, बन्धनमा राखे सर्प भएर जन्मने, काटमार गरे नरकमा बास हुने उल्लेखित धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ । रासस
← ८ पनि पास नगरेका २६ वर्षीय युवासँग ३५ अर्बको सम्पत्ति → श्रीमानलाई निद्राको औ’षधी खानामा खुवाएर प्रेमीसँग गर्थिन् यस्तो हर्कत, एक दिन भयो सबै हद पार